3,000 Oo Askari Oo Ciidanka Gaarka ah Lagu Sii Kordhiyay - Cakaara News
3,000 Oo Askari Oo Ciidanka Gaarka ah Lagu Sii Kordhiyay
Jigjiga(CN) Arbaco, 21ka October 2015, waxaa xerada tababarada ciidanka ee Shaalaqe Mahad Soofe lagu soo xareeyay 3,000 oo askari oo cusub kuwaas oo lagu sii kordhinayo tirada ciidanka gaarka ah ee deegaanka iyadoo wakhti xaadirkana uu tababarkii u bilawday.
Ujeedada kordhinta ciidanka gaarka ah ee deegaanka ayaa ah mid lagu xoojinayo ilaalinta xuduudaha balaadhan uu dalkeena Itoobiya la leeyahay wadamada aan dariska nahay sida Soomaaliya, Jabuuti iyo Keenya iyo in la xoojiyo ladagaalanka iyo tirtirida argagixisada Al-qushaash.
Sidaan wada ogsoonahayna, ciidanka gaarka ah ee deegaanku ma aha mid iska yimid ee waa mid ku yimid illin iyo oohin shacab kadib markii ay deegaanka iyo shacabka daganba ay daashatay hurgumooyinkii iyo hagardaamadii, xasilooni daridii, horumar diidkii iyo kalsooni daridii, dhac iyo boobkii UBBO kuhaysay shacabwaynaha deegaanka mudo dheer.
Hadaba, shacabka deegaanka oo udulqaadan waayay aadna uga cadhooday dhibaatooyinka naxariis darada ah ee UBBO kuhaysay awood ay iskaga celiyaana aan haysan ayaa ilaahay kabaryay inuu UBBO kaqabto. Ilaahayna waa ka aqbalay baryadoodii. Wuxuuna siiyay nasri deg-deg ah-Dawlad dhalinyaro ah, geesinimo, go'aan iyo karti adag oo waxbaratay oo kadhiidhiday xumaanta cadawga UBBO uu kuhayo shacabkooda. kuna midoobay siday shacabkooda dhibaatooyinka ubbo kuhayso uga saari lahaayeen.
Talaabooyinkii ugu horeeyay ee fikirka saliimka ah iyo cilmiga kudhisnaa ayaana lagu hindisay cudud ladagaalanta UBBO. waxayna noqdeen Liyuu boolis.
Si kastaba ha ahaatee, Waxaan shaki kujirin in ciidanka gaarka ah ee deegaanku uu xoogagii nabadiidka UBBO ay gabi ahaanba ka afjareen deegaanka mudo gaaban gudaheed taasina ay sababtay in mashaariicdii hormarineed ee awal laga fulin la’aa deegaanka mashruuc walba laga hirgaliyo goobtii loo qorsheeyay waana guul wax ku ool ah oo shacabka deegaanka usoo hoyatay iyo nabadgalyo taam ah oo uu maanta shacabka deegaanku ku naaloonayo cid walbana ay marag iyo mar khaati katahay nabaddii deegaanka inuu sugay ciidanka deegaanku gabi ahaanba.
Waxaa intaa dheer, in xoogaga argagixisada sida al-shabab (al-qushaash) ee amniga wadamada bariga afrika khal-khal galisay in aysan hawaysan Karin deegaanka soomaalida itoobiya oo xuduud dheer la leh wadanka soomaaliya oo sida la ogyahay argagixisada caalamigu saamayn wayn kuleedahay daganaan la’aanta siyaasadeed iyo amnigiisa.
Sidoo kale, dunidu waxay marag iyo markhaati katahay isku dayadii ay sameeyeen kooxaha argagixisada caalamiga ah ee al-qushaash in ay gudaha deegaanka soo galaan dhibna ka gaystaan kal hore 2014 in ciidamada liyuu boolisku jab lama ilaawaan ah iyo dhirbaaxo kulul ay lamareen al-qushaash. Cashirna udhigeen, caalamkuna mahad naq badan iyo ixtiraam badan oogu hayaan ciidanka gaarka ah ee DDSI (liyu boolis) iyo waliba inay heegan had iyo jeer u yihiin inay ka hortagaan wax kastoo ku soo gardarooda shacabka deegaanka soomalida iyo ka dalkaba.
Ciidanka gaarka ah ee DDSI (Liyu Boolis) waa ciidanka dhidibada u aasay horumarka maanta kamuuqda deegaanka sida: isufurka jidadka degmo ilaa gobol, gobol ilaa gobol, qabalee ilaa qabalee hoosaad oo horay ukala xidhnaa, hirgalinta mashaariicaha waawayn ee aan deegaanka horay uga jirin, dib u curashada, dib udajinta, socdaaladii dil iyo dibadba laga sameeyay ee dhanka xoojinta xidhiidhka dadwaynaha, iyo amniga taamka ah ee 100% maanta kajira gayiga deegaanka soomaalida itoobiya. Kuna guulaystay in uu helo taageerada iyo garab istaaga shacabka deegaanka iyadoo uu shacabkuna kolsooni buuxda ay kuqabaan ciidankooda maantana ay kufaanayaan sida xaqiiqdu tahay.
Ugudanbayna, waxay guulo laxaad leh kasoo hoyiyeen ladagaalanka argagixisada ee gudaha wadanka soomaaliya kadib markii ay nabadgelyadii deegaanka meel saareen iyagoo ugurmaday kanadamqaday dhibaatadii alqushaash kuhaysay shacabka walaalahood ah ee kunool wadanka aan dariska nahay.